'छोरो त मेरो को#रोनाले लगिहाल्यो नि!' - Aajako Nepali Khabar
‘छोरो त मेरो को#रोनाले लगिहाल्यो नि!’
ससुरा र बुहारी अस्पतालबाहिर कुरिरहेका छन्। ससुरा प्रतीक्षालयको एउटा कुर्सीमा बसेर लगातार हातमा स्यानिटाइजर लगाइरहेका छन्। बुहारी भने घरी कुर्सीबाट उठेर फोनमा कुरा गर्छिन्, घरी अस्पतालका कर्मचारीसँग कुरा गर्न खोज्छिन्। उनका हात काँपिरहेका छन्। छटपटी दुबैलाई उत्तिकै देखिन्छ।
सोमबार बिहान कर्णाली प्रदेश अस्पतालको ‘को#भिड अस्पताल’ मा देखिएको यो छटपटी को#रोनाबाट मृ#त्यु भएका चिङ्गाड गाउँपालिका-२ का प्रेम बिकका बुबा र भाउजुको हो।
अस्पतालबाट शव लिन आएका शववाहन र सेनाको ट्रकलाई उनका बुवा सेते कामीले नियालिरहेका थिए। ‘ला#स त अब यसैले लाने होला,’ सेनाको ट्रक देखाउँदै उनले भने, ‘हामी केमा जाने हो, गाडी बन्द छन्। रिजर्भ गरी लैजाने क्षमता हाम्रो छैन।’
उनीहरूलाई अर्को पनि चिन्ता थियो- ला#स जलाउने चिता कसरी बनाउने? यसैका लागि प्रेमकी भाउजु कमलाले बारम्बार आफन्तलाई फोन गरिरहेकी थिइन्। उनका घरबाट आफन्त आउन सक्ने सम्भावना थिएन।
उनले छिन्चुमा रहेका आफन्तलाई चिता बनाउन सहयोग गरिदिन आग्रह गरिन्। त्यहाँबाट भेरी नदीमा पुगेर आफन्तले चिता बनाइदिए। नेपाली सेनाले लिएर उनका देवर प्रेमको शव त्यसैमा जलाइदियो।
चार महिनाअघि प्रेम भारतको गुजरात प्रान्तको राजकोटमा मजदुरी गर्न गएका थिए। त्यहाँ को#रोना महा#मारीले विकराल रूप लिएपछि उनी नेपाल आए। वैशाख ४ गते उनी घर पुगेका थिए।
घरमा प्रेमका २ छोरी छन्। एक छोरी ९ वर्षकी भइन्। अर्की ९ महिनाकी। उनलाई ज्व#रो, खोकी भएकाले घरमा कसैलाई नछोएर अलग्गै बसेका थिए।
गाह्रो हुँदै गएपछि परिवारले घरमै स्वास्थ्यकर्मी बोलाएर उपचार गर्ने प्रयास गरे। त्यसले कुनै पार नलागेर वैशाख १२ गते कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा ल्याइएको थियो। ‘साह्रै गाह्रो भयो, बाटोमा ल्याउँदा पनि म#र्लाजस्तो अवस्था भएको थियो,’ प्रेमका बुवाले भने, ‘को#रोना भएको रहेछ, छोरालाई लगिहाल्यो नि!’
आइतबार राति मृ#त्यु भएका प्रेम २६ वर्षका मात्र थिए। उनका दुई दाजुभाइ छन्। भारतमै गएका उनीमध्ये भाइ घर आइसकेका छन्। दाइ आउन लागेका छन्।
‘को#रोना बढेको छ भनेर बच्न घर आउनुभयो, यहाँ पनि यही रो#गले लग्यो,’ कमलाले भनिन्। प्रेमलाई यसअघि कुनै पनि समस्या नभएको उनले बताइन्।
छोरी सानी भएकाले अस्पतालमा प्रेमलाई सहयोग गर्न श्रीमती आउन पाइनन्। उनका भाउजु र बुवा कुरूवाका रूपमा अस्पताल आएका थिए।